दुर्भाग्यवश, त्रुटि 301, कम्प्युटर प्रणाली को सुरुमा उत्पादन जो एक हार्ड डिस्क प्रारम्भ विफलता - समस्या पर्याप्त गम्भीर छ, र यो तरिका तपाईँको HP नोटबुक को सबै भन्दा फेला परेन। निस्सन्देह, यो असफलता को उपस्थिति हार्ड ड्राइभ एक विफलता को शुरुवात संकेत हुन सक्छ, तर केही अवस्थामा, त्रुटि हार्ड ड्राइभ प्रतिस्थापन बिना समाधान गर्न सकिन्छ।
HP ल्यापटप: त्रुटि 301. यो के अर्थ राख्छ?
त्यसैले, समस्या को एक प्रत्यक्ष समाधान मा embarking अघि, तपाईं पत्ता लगाउन यसको सार के हो आवश्यक छ।
हार्ड ड्राइभ त्रुटि 301 हार्ड ड्राइभ तथाकथित भाँचिएको क्षेत्रहरु पहुँच जब सिस्टम नाटकीय कहिलेकाहीं पनि नीलो पर्दा दिने सुस्त र बाहिरै गर्न, सुरु कारण जो समावेश संकेत गर्छ। तर यो मात्र सञ्चालन गर्न लागू ओएस पहिले नै लोड गर्दा।
ओएस को सुरु मा, उपकरण नै तरिकामा खराब क्षेत्रहरु को उपचार गर्न, यो BIOS मा जाँच यसलाई आफ्नो कामको लागि आवश्यक घटक लोड गर्दा पछि यो सिस्टम तिनीहरूलाई जानकारी पढ्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई तिर जान्छ। सुरुमा, स्थिर घटना बुट सन्देशहरू धेरै प्रयोगकर्ताहरू को प्रतिक्रिया द्वारा प्रमाणित, तपाईं प्रयोग गर्न सक्छन्। तर यो पुरानो हार्ड ड्राइभमा बस फाल्नु छ जब भविष्यमा त्रुटि 301, घातक साबित हुनेछ सम्भव छ। त्यसैले, यो सङ्घर्ष गर्न आवश्यक छ।
विफलता को कारण र यसको परिणाम
तर, त्रुटि 301 समाधान कसरी बिना HP नोटबुक को सबै मालिक मुख्यतया हार्ड डिस्क क्षेत्र किन भङ्ग प्रकट को प्रश्न रुचि राख्नुहुन्छ।
यसलाई सरल जवाफ असम्भव छ। तर अक्सर यो सामान्यतया कारण ठंडा सिस्टम को गलत सञ्चालन गर्न उत्पन्न जो हार्ड ड्राइभमा त्रुटिहरू, कारण छ।
असफल क्षेत्र पहुँच गर्न प्रयास गर्दा प्रोसेसर को तापमान बारेमा 90 centigrade डिग्री पुगेपछि अवस्थामा छन्। यो कठिन विफलता को उन्मूलन मौका गर्न छोड्न भने, माथि प्रोसेसर र Motherboard असफल हुनेछ भन्ने तथ्यलाई गर्न पुग्न सक्ने अनुमान छ।
अब एक चलिरहेको सिस्टम मा पहिलो चरण हार्ड डिस्क त्रुटि 301. कसरी सम्बोधन गर्न सिधै, तपाईं जमीन र उपकरण ट्याबमा भर्चुअल विभाजन को गुण मा मानक प्रणाली उपकरण प्रयोग गरेर भाँचिएको क्षेत्रहरु जाँच गर्नुपर्छ। यो स्वचालित त्रुटि सुधार निर्दिष्ट गर्न मनमोहक छ।
तर यो विधि, काम गर्न सक्छ त्यस्तो / X / च / आर रूपमा थप विकल्पहरू संग chkdsk आदेश संग आदेश कन्सोल प्रयोग गर्न सबै भन्दा राम्रो छ त्यसैले। यदि यो इच्छित प्रभाव दिन छैन, तपाईँले स्थापना वा रिकभरी डिस्कबाटबुटगर्नुहोस् गर्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यसपछि आदेश लाइन, Shift + F10 संयोजन कारण उही सञ्चालन प्रदर्शन। प्रणाली पहुँच वा प्रारम्भ गर्न प्रयास गर्न असफल भएमा, यसलाई अर्को ओएस सुरुवातमा जाँच गर्न आग्रह गरिने छ। ल्याप्टप पुनः सुरु र प्रक्रिया को अन्त को लागि प्रतीक्षा रहनेछ।
को भिक्टोरिया कार्यक्रम प्रयोग
तर, माथि विधिहरू सबै सक्दैन खराब क्षेत्रहरु पहिचान गर्न। त्रुटि कोड 301 यदि सही छैन, त्यसपछि हार्ड ड्राइभमा crumble गर्न सुरु भएको छ भने, खराब क्षेत्रहरु अलग छ जब समस्या निर्मूल गर्न मुख्य उपकरण छ।
पहिलो चरणमा यो ठाउँ, कुल को 5-15% को क्रम बलिदान हुनेछ। तर यो पहिचान गर्न आवश्यक छ यसलाई ब्रेकिंग सुरु केही क्षेत्रहरु संग।
यो गर्न, भिक्टोरिया विश्वव्यापी कार्यक्रम प्रयोग गर्नुहोस्। यसको परिणाम र यसलाई उल्लेख को तथ्याङ्क तिनीहरूलाई बस सम्बोधन गरिएको छ लागि भविष्यमा प्रणाली कटौती हुनेछ जो हार्ड ड्राइभ को सही राशि, थाहा गर्न सम्भव हुनेछ। खैर, तपाईं त्रुटि बरु प्रणाली संग भन्दा भर्चुअल विभाजन संग थप सम्बन्धित छ अक्सर पर्याप्त समीक्षा पूरा गर्न सक्छन्।
मेटाउने र भर्चुअल विभाजन पुन सिर्जना
अब, खाता माइनस को भिक्टोरिया कार्यक्रम प्रकट कि मात्रा मा लिएर, तपाईं मेटाउन र त्यसपछि यसलाई पुन: सिर्जना गर्न चाहेको हार्ड डिस्क त्रुटि 301 भर्चुअल विभाजन समाधान कसरी को प्रश्नको जवाफ।
कृपया ध्यान दिनुहोस् अवरोध को उपलब्धता प्रणाली विभाजन छैन, तपाईं भर्चुअल डिस्क ढाँचाबद्ध गर्न सक्नुहुन्छ, तर जहाँ सिस्टम स्थापित छ मुख्य ड्राइभमा जानकारी हानि जोगिन गर्न, यो कि बारे छैन।
यी प्रदर्शन सञ्चालन ड्राइव नियन्त्रण खण्ड, नियन्त्रण मेनु (प्रशासन) RMB कारण कम्प्युटर को प्रतिमा मा स्थित छ जसमा हुन सक्छ। खैर, विन्डोज 10 मा, यो "एक्सप्लोरर", र छैन "डेस्कटप" मा छ।
कि पछि तपाईं फेरि खाता कटौती पहिले ठाउँ परिभाषित मा लिएर, नयाँ मात्रा (सरल भर्चुअल विभाजन) सिर्जना गर्न आवश्यक छ, र यसको प्रावधान र सक्रियता बनाउन।
पेजिंग फाइल अक्षम
कहिलेकाहीं त्रुटि 301 सफाया छ जो अर्को विधि, यो गर्दा harnessing सिस्टम फाइल pagefile.sys accesses को पृष्ठ संख्या हाल्नु फाइल र सिस्टम को लागि, र भर्चुअल स्मृति रूपमा भर्चुअल विभाजन असक्षम छ, तर यो त खराब क्षेत्रहरु वा एक क्षेत्र अवस्थित गर्न सकिन्छ असफल खण्डमा यो क्षेत्र आरक्षित।
प्रतिमा सिस्टम गुण मेनु भनिन्छ मा RMB मार्फत बन्द कम्प्युटर खोल्न, उन्नत सेटिङहरू र eponymous ट्याब उत्प्रेरित गर्छ। यो स्वतः पत्ता लगाउन र लाइन मा चेक बक्स स्थापना यसको प्रयोग अक्षम अनचेक बटन को पृष्ठ संख्या हाल्नु फाइल आकार परिवर्तन प्रयोग गर्नुपर्छ। यस कार्यका माथिको सूचीमा प्रतिनिधित्व प्रत्येक खण्डको लागि गरिन्छ।
अन्तमा, सबै गरिन्छ जब, शायद त्रुटि अधिक 301 फेरि देखिने गर्दैन, तपाईं प्रणाली र सबै अवास्तविक विभाजन defragment गर्न आवश्यक छ।
यस कार्यका डिस्क विभाजन गुण को सेवा ट्याबमा पहुँच जुन विन्डोज-प्रणाली को मानक उपकरण, साथ गर्न सकिन्छ।
प्रणाली अनुकूलन गर्न र गति अप, टोली (defragmentation) कायम सीधा PCM मेनु "एक्सप्लोरर" मा एकीकृत गर्न सकिन्छ कुनै पनि कार्यक्रम प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने प्रदान। म यस्तो defragmenter उपयोगिता मा Windows निर्मित उपकरण भन्दा धेरै बेहतर देखिन्छ कि भन्न पर्छ। त्यसैले, यदि सम्भव भएसम्म, राम्रो प्राथमिकता optimizers दिन (तिनीहरूले हार्ड डिस्क मा सिस्टम मा आदेश बहाल अलि फरक सिद्धान्त प्रयोग गर्नुहोस्, र विशेष)।
कार्यहरू सम्पूर्ण सेट को समाप्तिमा, तपाईं नै उपयोगिता भिक्टोरिया चलाउन र नियन्त्रण एजेन्ट रूपमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अभ्यास 100 "कटौती" खराब क्षेत्रहरु को 99% उपेक्षा गरिनेछ भनेर देखाउँछ र परीक्षण त्रुटिहरू प्रकट गर्दैन।
त्रुटि हटाउन माथिको सामाग्री देखि देखेको रूपमा कोड 301 एकदम सरल हुन सक्छ। तर, यहाँ हामी मनमा पर्छ यसको उपस्थिति कि - हार्ड ड्राइभ crumble गर्न थाले र यो चाँडै हुनेछ भन्ने तथ्यलाई बारेमा पहिलो चेतावनी घण्टी हटाउन सकिने मिडिया वा अर्को हार्ड ड्राइभमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जानकारी बचत गरेपछि परिवर्तन गर्न। छैन प्रणाली रिसेट मा संलग्न, तपाईं सबै डाटा र स्थान एक छवि, बाह्य USB HDD ड्राइभमा सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ उदाहरणको लागि। यो पनि एक ठूलो पर्याप्त मात्रा भने, फ्लैश ड्राइव मा व्यक्तिगत फाइल र फोल्डरहरू प्रतिलिपि भन्दा धेरै बढी कुशल देखिन्छ। अझै पनि बिताउनुहुन्छ यो समयमा अब पछिल्लो हुनेछ।
को चरम अवस्थामा, हामी सबै अरू असफल भने, तपाईं हार्ड ड्राइभ को चुम्बक सहनुपरेको भनिन्छ एक अद्वितीय कार्यक्रम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ HDD सुधारनेवाला। तर औसत प्रयोगकर्ताको लागि यो बुझ्न र प्रयोग गर्न, साथै, डस-मात्र मोडमा रूसी इन्टरफेस र काम को कमी को प्रक्रिया जटिल हुनेछ पनि गाह्रो छ।
सर्ट मर्ज: को अल्गोरिदम को विवरण र डाटा क्रमबद्धमा अन्य प्रकार देखि मतभेद
प्रक्रियागत कार्यक्रम। मानव-कम्प्युटर संवाद, विकास को इतिहास
प्रोग्रामर Dzhon Karmak
अभिनेत्री Evgenia Dmitrieva: जीवनी, Filmography, व्यक्तिगत जीवन। पति र छोराछोरीलाई Evgenia Dmitrieva
Dzhim Kerri: सिनेमा। Dzhima Kerri छोरी। Dzheyn Kerri (जेन Carrey): व्यक्तिगत जीवन
सोख, घर देखि आय: जन्म अघि प्रसूति बिदा मा के गर्न